Iningi labantu alisamfuni uZuma, ngokocwaningo lwakamuva | News24
Iningi labantu alisamfuni uZuma, ngokocwaningo lwakamuva
Cape Town – Ucwaningo lwakamuva seluveze ukuthi ukuthandwa kukaMengameli Jacob Zuma sekwehle kakhulu njengoba abantu abayisikhombisa kwabayishumi lapha eNingizimu Afrika bekholwa ukuthi kumele abeke phansi izintambo.
Ngesikhathi bebuzwa ukuthi uZuma kumele asule yini njengoMengameli, u-74% wabantu abangu-1000 baseNingizimu Afrika bathe yebo.
Lolu cwaningo lwenziwe ngemuva kwesinqumo sikaMengameli Zuma sakamuva sokuhlela kabusha iKhabhinethi yakhe ngesonto eledlule.
AbeMhlophe, amaNdiya, kanye namaKhaladi bakhombise ukungamfuni kakhulu uZuma, njengoba kube u-84% wabo ufuna ukuthi uZuma asule.
OLUNYE UDABA: VIDEO: Alikho ilungu le-ANC elizovota namaqembu aphikisayo – Mantashe
Lolu cwaningo olwenziwe ngomakhalekhwini, lwenziwe kusetshenziwa ama-SMS yi-Kantar TNS, okuyinkampani eyenza ucwaningo emhlabeni wonke.
Ngaphezu kwalokho, kolunye futhi ucwaningo olwenziwe yi-TNS esikhathini esingamasonto amabili ngoMashi – kodwa ngaphambi kokuba uZuma ahlele kabusha iKhabhinethi, bangu-20% kuphela abantu bakuleli abahlala ezindaweni ezisemadolobheni ababecabanga ukuthi uZuma wenza umsebenzi omuhle njengoMengameli wezwe.
Lokhu kukhombisa ukwehla okukhulu njengoba babengu-58% ngonyaka wokuqala uZuma enguMengameli, ngo-2009.
Esitatimendeni, iKantar TNS, ebilokhu ilandela ukwesekwa kukaZuma kusukela ngonyaka ka-2009, iqaphele ukuthi lolu shintsho olungaka okwesekweni kukaZuma lubonakala kakhulu kubantu abamnayama, njengoba u-64% uphika ukuthi wenza umsebenzi omuhle.
Lokhu kunyukile njengoba kusuka ku-59% wangoFebhuwari wangonyaka odlule.
Abantu besifazane abamnyama babonakala bengasayizwa indaba kaMengameli Zuma njengoba bengu-65% abazwakalise ukungagculiseki ngaye uma kuqhathaniswa no-57% wangonyaka odlule.